Izici Ezenza i-Gmail ihluke ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
May 12, 2021 0 Comentarios 506
Ukuqamba kokugcina Inesikhathi esingakanani insizakalo ye-imeyili yakwaGoogle, ukuthi ibeke iGmail endaweni efanele. Ama-imeyili e-Gmail asetshenziswa kakhulu futhi adumile emhlabeni anenombolo efanele yabasebenzisi abayizigidi ezingama-600.
Njengamanje i-Gmail Kuyanda usuku nosuku, futhi lokhu kuholele iGoogle ukuthi ibuyekeze i-interface ye-Gmail iye ezingeni elisha, njengokungeza izici ezintsha ngamanye amagajethi ayizinguqulo ezintsha.
Yize kukhona okunye Amapulatifomu enza izinsizakalo ze-imeyili njenge-Outlook, Microsoft, Yahoo Mail futhi aqhubeka nanamuhla, kepha awafani nokunikeza izixazululo zokugcina, ukusesha nokuhlela njengoba kwenza i-Gmail.
Ukubona lokho izinzuzo zine-gmail nokuthi ingaphumelela kanjani, iGoogle ngokunikezwa kwabasebenzisi kufanele ithengise ukukhangisa, ifake izindaba ngokuya ngemiyalezo yama-imeyili abo, isungule ukukhushulwa, imilayezo evela kubahlomuli ukuze inkampani ibuyekeze.
Ngenxa yokuziphendukela kwemvelo leyo i-Gmail ebinayo kulezi zikhathi, sethula wena, i-
Izici ezenza i-Gmail ihluke,
Ukufinyelela ngesimemo: Noma yimuphi umsebenzisi omusha angathumela izimemo kumaqembu abantu.
Isitoreji esingu-2.5 GB: Ngenkathi amanye amapulatifomu e-imeyili kufanele asuse ama-imeyili ukuze abe nesikhala, i-Gmail ikunikeza amandla okugcina.
Sesha: Thola ngokushesha futhi kalula amagama angukhiye ukuthola i-imeyili oyifunayo.
Ukusetha okubonakalayo: Inketho yokuthi i-Gmail ikwenza lokho njengomsebenzisi ungafaka isithombe sangemuva eposini bese usenza ngokwezifiso.
Ama-akhawunti athunyelwe; Ungaba nokufinyelela kuthileyi lakho, esimweni sendawo yenkampani, igama elibekiwe lenziwa kwabanye abantu ababhalela i-akhawunti yenkampani.
IDrayivu kanye Namathuluzi WeDokhumenti: Ungenza imisebenzi yamadokhumenti egcinwe ku-Google Amadokhumenti.
I-iOS noma i-Android: Ungasebenzisa i-Gmail kuma-mobiles wakho njengenguqulo yedeskithophu.
Amalebhu: Kungumsebenzi lapho ungamisa khona ukuthunyelwa ngemizuzwana engama-30 kusukela ngesikhathi sokuthumela kushiye ibhokisi lokuphuma. Amalebhu anohlu lwezinketho lapho ungenza khona ngezifiso i-mail interface.
Imilayezo ye-Hangouts, i-GTalk: ikunikeza ingxoxo lapho abasebenzisi bangathumela khona imiyalezo yabo koxhumana nabo futhi benze amakholi wevidiyo.
Hlela i-imeyili yakho: I-Gmail ivumela umsebenzisi ukuthi ahlukanise ama-imeyili akhe ngendlela ehlelekile, asebenzise izigaba zezintandokazi zakhe njenge-Main, Promotions ne-Social noma engeza ezinye zazo njengokuthanda kwazo.
Ikuvumela ukuthi uthulise ama-imeyili weqembu ukugwema iziphazamiso: Ikuvumela ukuthi ubuyekeze umlayezo ngesikhathi sengxoxo lapho ungeke uthole khona izaziso eziqondile.
Thulisa intambo ye-imeyili.
Vula el umyalezo.
Chofoza kufayela le- inketho "Thulisa".
I-Gmail inephaneli Ukubuka kuqala: Ukuze unike amandla le nketho kufanele unike amandla amaLabhu ngokuchofoza ukumiswa kwamaLabhu bese uhlola inketho ukuze unike amandla ukugcina izinguquko.
Ungayakha kanjani i-akhawunti ye-Gmail?